एउटै भेटमा प्रभाव छाड्ने चमत्कारिक ब्यक्तित्व कसरी तयार हुन्छ ? हेर्नुहोस् विस्तृतमा - TV Annapurna
एउटै भेटमा प्रभाव छाड्ने चमत्कारिक ब्यक्तित्व कसरी तयार हुन्छ ? हेर्नुहोस् विस्तृतमा
काठमाडौं। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, एप्पलका पूर्वसिइओ स्टिब जब्स, वेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन, वाराक ओवामा, उनीहरुमा एउटा खास विशेषता के होला ?
तपाई उनीहरुलाई मन पराउनुहोस् या घृणा गर्नुस्। तर एउटा कुरा स्वीकारन् करै लाग्छ उनीहरु चमत्कारिक ब्यक्ति हुन्।
वर्किङ प्लेसमा कुनै चमत्कारिक टिम लिडर हुनुको अर्थ हो, राम्रो कामको ग्यारेन्टी। यद्यपी चमत्कारिक ब्यक्तित्व जन्मजात आउने होइन। यसलाई आफूभित्र जन्माउने हो। केही खास मेहेनत र फरक पनलाई अपनाएर चमत्कारिक ब्यक्तित्वको विकास गर्न सकिन्छ।
पहिलो सर्त हो, आफ्नो अगाडिको ब्यक्तिसँग प्रभाव छाड्ने गरी कुरा गर्नु। चाहे त्यो भाषण दिएर होस् या दोहोरो कुराकानी गरेर होस्। चिठ्ठी लेखेर होस् या किताव लेखेर।
राम्रो वक्ताहरु असरदार पङ्तिहरुको प्रयोग गरेर, पुराना उखान वा कथा हालेर या जोक गरेर पनि आफ्नो भाषणमा मन्त्रमुग्ध गर्न सक्छन्। कुरा गरिरहेको समयमा वा भाषण गरिरहेका बेला उनीहरु आफ्नो हातबाट, अनुहारको भावभङ्गीबाट वा शरिरको हावभाउबाट पनि अगाडिको ब्यक्तिलाई प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्।
उनीहरु आफ्नो वडी ल्याङ्ग्वेजबाटै आफ्नो धारण अगाडिको ब्यक्तिलाई सुनाइरहेका हुन्छन्। उनीहरुको हावभाउले पनि सुन्नेहरुलाई एक खालको विश्वास दिलाउँछ।
आँखा जुधाएर, मुस्कुराएर, आफ्नो बारेमा कुरा गर्न हौस्याएर विश्वास जितिरहेका हुन्छन्। उनीहरुलाई मोहित पारिरहेका हुन्छन्। मान्छेहरु प्राय अरुसँग भेट्दा प्रश्न सोध्ने गर्छन्। त्यो प्रश्न विश्वास वढाउने खालको हुनु जरुरी छ।
तर जमत्कारिक ब्यक्तित्व भएकाहरुलाई प्रत्येकसँग एकएक कुरा गर्नु पर्छ भन्ने जरुरी छैन। उनीहरु टाँढैबाट पनि आफ्नो आकर्षण छोड्न सफल भइरहेका हुन्छन्।
उदाहरणका लागि नरेन्द्र मोदीलाई नै लिउँ न। आज उनी भारतको करोडौं मान्छेका माझ लोकप्रिय छन्। नरेन्द्र मोदीले प्रत्येकलाई त भेटेका छैनन्। तर आफ्नो भाषण र हावभाउबाट उनले धेरैलाई कायल बनाएका छन्। करोडौंलाई उनले फ्यान बनाएका छन्।
स्टिब जब्स पनि अर्को उदाहरण हुन्। उनको सबै भाषण सुनेकी र हेरेकी ओलिबिया फाक्स भन्छिन् ‘धेरै कर्मचारी जब्सलाई मनपराउँदैन थिए। तर पनि उनीहरु जब्सको पर्सनालिटीबाट मोहित हुन्थे।’
अमेरिकामा बस्ने ओलिबियाले ‘चमत्कारिक मिथु नामको किताव नै लेखेकी छिन्।’
किताव लेख्दा ओलिबियाले चमत्कारिक ब्यक्तिलाई पनि वर्गीकरण गरेकी छन्। उनी भन्छिन्के ही मान्छेसँग स्टार पावर हुन्छ। जस्तो चलचित्रका अभिनेताहरु। उनीहरु क्यामेराको अगाडि राम्रो परफरमेन्स दिएका कारण सर्वसाधारणलाई फ्यान बनाउँछन्।
अर्को समूह छ, जो आफू अगाडिका मान्छेको कुरा निकै ध्यान दिएर सुन्छन्। यस्ता मान्छेका पनि फ्यान धेरै हुन्छन्। अर्को वर्ग हो साँच्चैकै चमत्कारिक व्यक्तित्वका धनीहरु। दलाइ लामा यही वर्गमा पर्छन्।
चमत्कारिक पात्र हुनुको धेरै फाइदाहरु छन्। जस्तो कुनै नेता केही कुराको प्रतिक नै बन्छ।
स्विजरल्यान्डको लुसान युनिभर्सिटीका जोन एन्टोनाकिसले यस बारेमा धेरै अनुसन्धान गरेका छन्। उनी भन्छन् केही मान्छेले एउटा प्रेरणादायी भाषण सुनेपछि सामान्यभन्दा १७ प्रतिशत बढि राम्रो काम गरेका छन्।
उनका अनुसार, यदि तपाईसँग चमत्कारिक ब्यक्तित्व छ भने, तपाईले कयौं काम अरुबाट सहजै गराउन सक्नु हुन्छ। उनीहरुलाई आफ्नो रायमा सहमत गराउन सक्नु हुन्छ।
सन् २०१६ भएको एउटा अनुसन्धान भन्छ जुन मान्छेको चमत्कारिक ब्यक्तित्व हुन्छ, सर्वसाधारण त्यसलाई बढि नै विश्वास गर्छन्।
के त्यसो भए जो कोही चमत्कारिक ब्यक्तित्वको धनी हुन सक्छ त ?
यसका लागि एउटा प्रयोग गरौं। तपाईलाई सबैभन्दा चमत्कारिक ब्यक्तित्व को लाग्छ त्यसलाई एक पटक फेरि हेर्नुस्। उसका भाषण सुन्नुस्। भाषणलाई महशुस गर्नुस् त, केही पनि नयाँ कुरा त छैन। तै पनि उ चमत्कारिक लाग्छ। किनरु
वास्तवमा यस्ता मान्छेहरु शब्दको सही प्रयोग गरेर आफ्नो कुरा राख्ने खुवी भएका हुन्छन्। यसका लागि जरुरी छ सही उदाहरण, सही पङ्तिको सही ठाउँमा प्रयोग। सही समयमा कथा भन्नु। जोक गर्नु वा उदाहरण प्रस्तुत गर्ने खुवी यस्ता व्यक्तित्व भएकाहरुसँग हुन्छ। दुई फरक कुरालाई एउटा विन्दुमा उभ्याएर तुलना गर्ने क्षमता पनि यस्ता ब्यक्तिहरुसँग हुन्छ। यसले भाषण सुन्नेहरुले नयाँ कुरा केही नभेटे पनि नयाँ कुरा सुनिरहेको जस्तो महशुस गर्छन्।
तपाई जति पनि राजनेताहरुलाई हेर्नुस् न, उनीहरु सही समयमा सही प्रशङ्गहरु घुसाएर भाषण दिन्छन्। नरेन्द्र मोदीलाई नै हेरौं। उनी आफ्नो भाषणमा पुरानो सरकारको कामलाई आफ्नो कामसँग तुलना गर्छन्। त्यसलाई पुष्टी गर्न तथ्यांकहरु प्रयोग गर्छन्। कथा हाल्छन्। कहिलेकाँही जोक पनि गर्छन्। यही कारण उनको भाषण वा ब्यक्तित्व चमत्कारिक लाग्छ।
चमत्कारिक हुनका लागि अगाडिको मान्छेको धारण बुझ्न अति नै आवश्यक हुन्छ। अर्थात भनौंन मन पढ्न सक्नु पर्छ। त्यसपछि उसको भित्र आशा जगाउनु पर्छ। आफ्नो लागि विश्वाश जगाउनु पर्छ। उच्च नैतिक कुरा गरेर आफूलाई सर्वश्रेष्ठ ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ। यही त गरेका हुन्छन् नि( चमत्कारिक ब्यक्तित्व भएका हुन्। र यही गरेका कारण उनीहरु चमत्कारिक देखिएका हुन्छन्।
यस्तै उदाहरण थिइन् वेलायतकी पूर्व प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्यचर। उनी प्राय ओजिलो भाषण गर्थिन। उनले सन् १९८० मा आफ्नो पार्टी बैठकमा दिएको भाषण आज पनि उदाहरणका रुपमा याद गरिन्छ। त्यो भाषणमा उनले विरोधिहरुलाई एकदमै आक्रमण गरेकी छिन्, तर उदाहरण, विभिन्न प्रशंङ्ग, तथ्यांकहरुको प्रयोग गरेर।
अरुलाई प्रभाव पार्नका लागि आफ्नो हावभाउलाई पनि सही समयमा सही तरिकाले प्रस्तुत गर्नु पर्छ। तपाईको शब्दहरु मात्र होइन, तपाई चलाउने आँखा, हल्लाउने हातले पनि मान्छेलाई आत्मविश्वास भर्नु पर्छ। यही गुण हुँदा त चमत्कारिक ब्यक्तित्व हुने हो।
हेरौं न, हिलारी क्लिन्टनको तुलनामा विल क्लिन्टन आज पनि लोकप्रिय छन्। हिलारीको भाषण सुन्दा लाग्छ उनले लेखेको कुरा पढिरहेकी छिन्। तर बिल क्लिन्टनको भाषण भित्रैबाट भरिएर आएको सुनिन्छ। बाराक ओबामाको भाषण पनि त्यही हो।
तपाईले साधारण कुरा पनि ओजिलो तरिकाले, विश्वास जगाउने तरिकाले सुनाउन सक्नु भयो मान्छेहरु तपाईको फ्यान बन्न थालिहाल्छन्। चमत्कारिक ब्यक्तित्व भएका मोदी, ओवामा, बिल क्लिन्टन, स्टिव जम्ब आदिले आखिर यही त गरेका हुन् नि। बीबीसी
नवलपरासीमा ४० जना विद्यार्थी बोकेको स्कुल बस दुर्घटना
नेता सिंहद्वारा गणेशमान सिंहको शालिकमा माल्यार्पण